काठमाडौंमा कोठा र सटर धमाधम खाली भएपछी, सस्तो भाडामा नि मान्छे पाउन मुस्किल ! घरधनी तनावमा – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौंमा कोठा र सटर धमाधम खाली भएपछी, सस्तो भाडामा नि मान्छे पाउन मुस्किल ! घरधनी तनावमा
काठमाडौंमा कोठा र सटर धमाधम खाली भएपछी, सस्तो भाडामा नि मान्छे पाउन मुस्किल ! घरधनी तनावमा
काठमाडौं- केही महिनासम्म कोठा पाउन मुस्किल पर्ने काठमाडौंमा अहिले भने कोठा भाडामा लगाउन मुस्किल देखिएको छ। डेरामा बस्न होस् वा व्यापार व्यवसाय गर्न सटर पाउनै मुस्किल हुने काठमाडौंमा अहिले ‘टु लेट’, ‘कोठा, फ्ल्याट खाली छ’ भन्ने सूचनाहरू जताततै देख्न पाइन्छ। को’रोना सं’क्रमणका कारण ४ महीना लामो बन्दाबन्दी र त्यसपछिको नि’षेधाज्ञाले उपत्यकामा घरहरू खाली भएका हुन्।
को’रोनाले व्यापार व्यवसाय धरासायी बन्न थालेपछि सटरहरू खाली हुन थालेका छन् भने अध्ययनका लागि उपत्यका आएका विद्यार्थी एवं अन्य कामले यहाँ रहेका नागरिकहरू गाउँ फर्किएपछि अहिले कोठा र फ्ल्याटहरू खाली भएका हुन्।
यहीँ भएकाहरू पनि कम भाडा भएको घरमा सर्ने क्रम बढेको छ। यति मात्रै होइन काठमाडौंको बसाई टुंग्याएर गाउँ फर्किनेको संख्या पनि बढी छ। होटल, रेष्टुरेण्ट, होस्टलदेखि अधिकांश व्यबसाय गर्ने व्यबसायीले ब्यवसाय नै बन्द गरेर घर खालि गराएका छन्। कति कोठा खाली भए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नभएपनि अधिकांश घरमा कोठा खाली देखिन्छन्।
काठमाडौं अनामनगरका एक घरधनी हरिप्रसाद पराजुली उपत्यका भरी नै एकनासको स’मस्या रहेको बताउँछन्। अनामनगर क्षेत्रमा मात्रै नभएर उपत्यका भरी नै सटर र फ्ल्याटहरू ठूलो संख्यामा खाली भएको उजको भनाइ छ।
को’रोना नियन्त्रणमा आएपछि बाहिरबाट आउने क्रम शुरु नहुँदासम्म यहाँका घरधनीहरूले ठूलो स’मस्या भो’ग्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उजले बन्दाबन्दी र नि’षेधाज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर को’रोनासँगै ल’ड्दै अगाडी बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने उनले बताए। अहिले काठमाडौँका जुनसुकै स्थानमा पुगे पनि घर खाली रहेको सूचनाहरू टाँसेको देख्न सकिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा फ्ल्याट नै भाडामा दिने प्रचलनले भाडामा बस्नेहरू पी’डित बनिरहेका थिए।
कहिले कोठा खोज्ने दलालको फन्दामा सर्वसाधारण पर्दै आएका थिए त कहिले घरबेटी नै अनावश्यक रुपमा भाडा असुल्दै आएका थिए। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। डेरवालहरूले छानीछानी सस्तोमा कोठा लिन पाउँछन्। भाडामा बस्नेहरूको संख्या घट्दै गएपछि ऋ’ण काढेर घर बनाएकाहरूलाई भने स’मस्या देखिएको छ। कोठाभाडा नै आम्दानीको स्रोत भएका घरधनीहरूलाई बैंकको किस्ता ति’र्न र दैनिक गुजारा गर्न समेत स’मस्या देखिएको छ।
काठमान्डूबासीका लागी अत्यन्तै दुखको खबर,कहिले होला समाधान?